Ndị a bụ igwe nwere gam akporo Otu gosipụtara na MWC 2018 | Gam akporosis
Na-achọ ekwentị na gam akporo Otu? Ndị a bụ ndị ewepụtara na MWC 2018
Edere Ferreno | | Mobiles, MWC, Gam akporo nsụgharị
Android One bụ otu oru ngo nke Google iji kwalite iji sistemụ arụmọrụ. Ọ bụ nsụgharị nke sistemụ arụmọrụ na-enweghị bloatware na oyi akwa nhazi. Dị dị ka Nokia na-eji ya. Ma ọ bụ ekwentị dịka Xiaomi Mi A1. Ugbu a, n’oge a etinyego ekwentị ọhụrụ MWC 2018 na mmemme a. Site na ihe anyi huru otu gam akporo si aga igbasa.
Brandsdị ndị ọzọ na-achọ ịkụ nzọ na ekwentị na-enweghị ọkwa nke ahaziri iche. Na mbido a nke MWC 2018 ekpughere ụfọdụ ekwentị ọhụrụ ga-eji ụdị a nke sistemu arụmọrụ.
Ọ bụ ya mere, Ọ dị mma igosi na ndepụta niile ụdị ọhụụ niile ga-eji gam akporo Otu. Yabụ, ndị ọrụ nwere ike ịmụtakwu banyere ekwentị ndị a ga-akụ ahịa na ọnwa ndị na-abịanụ. Ezigbo ma ọ bụrụ na ị na-achọ ekwentị na-enweghị oyi akwa nhazi.
4 Ndị ọzọ gam akporo igwe
Otu n'ime flagship ọhụrụ nke ika ahụ, gosipụtara ụnyaahụ. Ekwentị nke akara a na-asọpụrụ akụkọ ihe mere eme ya ma na-ele anya n'ọdịnihu. Anyị na-eche ihu otu ngwaọrụ zuru oke nke akara ahụ na ahịa. Ihe bụ ihe ọzọ, dị ka ọ dị na mbụ na Nokia, ọ na-eji gam akporo One. Ya mere, anyị nwere ike ịtụ anya mmelite ngwa ngwa.
Nke abụọ abụrụ ekwentị flagship ọhụrụ nke ika ahụ. Ọ bụ ngwaọrụ nwere ihe niile iji merie ndị ọrụ. Site na nhazi ọgbara ọhụụ na ezigbo nkọwa. Ọzọkwa, eziokwu ahụ ị na-eji gam akporo Otu na-emekwa ka o doo anya na ị ga-emelite ngwa ngwa. Ọzọkwa a nwekwuo ọnụnọ nke Google Assistant na ngwaọrụ ahụ. Ya mere, ndị ọrụ ga-enwe uru niile.
Na nke atọ bụ etiti dị n'etiti ika ahụ. Ekwentị ruru ahịa na ngalaba dị mgbagwoju anya mana nke akara ahụ na-eme ya nke ọma. Ya mere enwere ike ịmasị ọtụtụ ndị ọrụ. Ekwentị nke na-akụ nzọ na imewe na a nhazi nhazi dị ka Snapdragon 630. Nhọrọ dị mma maka ndị chọrọ ekwentị na gam akporo Otu nke dị ọnụ ala.
Ndị ọzọ gam akporo igwe
Ihe atọ ndị a bụ nke kacha dị ugbu a ịbụ akụkụ nke ezinụlọ gam akporo Otu.Ọ bụ ezie na enwerela ekwentị ndị ọzọ ugbu a. Ya mere anyi huru ka ezinulo si etolite. Anyị na-ahụ ụdị dịka Xiaomi Mi A1, HTC U11 Life ma ọ bụ Moto X4 n'etiti ha.
Anyị na-achọta nnọọ ole na ole Sharp ụdị na ndepụta. E wezụga Motorola. Site na ihe anyị nwere ike ihu na enwere ọtụtụ ihe dị iche iche na gam akporo One. Anyị nwere ike ịmatakwu ekwentị karịa ụbọchị ole na ole sochirinụ, ya mere, anyị ga-emelite ndepụta ahụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Nkuzi » Gam akporo nsụgharị » Na-achọ ekwentị na gam akporo Otu? Ndị a bụ ndị ewepụtara na MWC 2018
Leagoo onyinye na MWC na Leagoo S9, mbụ mmepụta oyiri nke iPhone X na Leagoo Power 5 na 7.000 mAh batrị
Site na MWC18 anyị na-egosi gị otu Art Emojis ọhụrụ nke Samsung Galaxy S9 na S9 Plus si arụ ọrụ